Alimanàka ny fotoam-pandoavan-ketra 2022 N.B: Si la date mentionnée est férié ou week end, l'échéance est réportée au jour ouvrable qui suit
Farafahatarany ny faha 15 17
IRSA, D.A, VAT, TMP, hetra amin'ny fahazoan-dàlana, Fandoavan-ketra amin'ny fifanarahana fiantohana, Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy sigara ary lalao filalaovana.
Alohan'ny 31 31
Hetra amin'ny fitaovana mandeha ho azy
Farafahatarany 15 15
Ampaham-bola IR ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny drafitry ny mpiasa. IRSA, D.A, TVA, TMP. fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy sigara ary lalao filalaovana.
Alohan'ny faran'ny volana 28
Fe-potoana fanefana ao anatin'ny 3 volana ny fampandrenesana momba ny hetra: IFT, IFPB.
Farafahatarany ny 15 15
IRSA, D.A., VAT, TMP. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro sy paraky voahodina ary lalao kisendrasendra.
Fahafatarany ny 15 15
Ampaham-bola IR ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny drafitry ny mpiasa. IRSA, D.A, TVA, TMP. Hetra fahazoan-dàlana. Ny fametrahana hetra amin'ny fifanarahana fiantohana. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro sy sigara voahodina ary lalao kisendrasendra.
Alohan'ny 02 2
Fanambarana ny entana amidy, fividianana vokatra eo an-toerana, vola naloa hafa.
Farafahatarany mialoha ny 16 16
Ho an'ny taom-piasana nifarana tamin'ny 31 Desambra, IRSA, D.A, TVA, TMP. Fanafoanana ankapobeny ny haba amin'ny fifanarahana fiantohana. IRCM, IDH ho an'ny taom-piasana nifarana tamin'ny 31 Desambra. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy sigara ary lalao filalaovana.
Mialoha ny voaloha ny volana Jona 1
Fara- fanefàna ny IFT, IFPB
Fanefàna farany 15
Fametrahana IR ho an'ny mpandoa hetra amin'ny fitondran'ny mpiasa. IRSA, D.A., VAT, TMP, Fakàna amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana momba ny zava-pisotro sy paraky amboarina ary koa ny lalao kisendrasendra.
IRSA, D.A, VAT, TMP, hetra amin'ny fahazoan-dàlana, Fandoavan-ketra amin'ny fifanarahana fiantohana, Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy sigara ary ny filalaovana ara-bitana.
Farafahatarany ny 15 16
Fametrahana IR ho an'ny mpandoa hetra amin'ny fitondran'ny mpiasa. IRSA, D.A., VAT, TMP. Fakàna amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana momba ny zava-pisotro sy paraky amboarina ary koa ny lalao kisendrasendra.
IRSA, D.A, TVA, TMP. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro sy paraky voahodina ary lalao kisendrasendra.
Fara fahatara ny 17 17
Fametrahana IR ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny rafitra mpiasa. IRSA, D.A., TVA, TMP. Hetra amin'ny hetra fahazoan-dàlana. Fametrahana ny fanambarana IFT, IFPB. Fametrahana hetra amin'ny fifanarahana fiantohana. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy paraky ary lalao kisendrasendra.
Tsy mihoatra ny 15 15
IR ho an'ny taom-piasana nifarana tamin'ny 30 Jona. IRSA, D.A, TVA, TMP, IRCM, IDH ho an'ny taom-piasana nifarana tamin'ny 30 Jona. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro vita sy sigara ary lalao filalaovana.
Farafahatany 15 15
Ampaham-bola IR ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny drafitry ny mpiasa. IRSA, D.A, TVA, TMP. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola sy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotro sy paraky voahidina ary ny filalaovana ara-bitana.